धादिङमा घट्यो विश्वले पत्याउन नसक्ने यस्तो अनौठो घटना [थाहा पाउँने सबै चकित] « Janaboli
काठमाडौं । जबर्जस्तीकरणी मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका प्रेम तामाङ धादिङबेंसीस्थित एक होटलमा आपत्तिजनक अवस्थामा रहेको भिडियो बाहिरिएसँगै धादिङ कारागारको चरम बेथिति सार्वजनिक भएको छ ।
उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४ सेर्तुङका तामाङ जिल्ला अदालत धादिङबाट कैद सजाय तोकिएका अभियुक्त हुन् । कानुनतः उनी जिल्ला कारागारभित्रै थुनिएको अवस्थामा हुनुपर्थो । किनभने उनलाई जिल्ला अदालत धादिङले जबरर्जस्ती करणी मुद्दामा २०७० जेठ २३ गते ११ वर्षको जेल सजाय तोकेको छ ।
तर उनी सदरमुकाम धादिङबेशीको एक होटलको कोठा न. १०४ मा नियोजित रुपमा थुनिन्छन् । उनलाई अरु कसैले थुनेको नभई जिल्ला कारागार धादिङबाट उपचार गर्ने बाहानामा आफैँ बाहिर आएका हुन् । यो पनि पढ्नुहोस् भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ ।
विमानस्थलको तीन किलोमिटर रनवे निर्माण सम्पन्न भएको विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख प्रवेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । धावन मार्गको चार तहको कालोपत्रे सकिएसँगै अव लाइटिङ र मार्किङको काम सुरु हुनेछ ।
यसअघि ठेकेदार कम्पनीलाई रकम भुक्तानी नहुँदा केही दिन काम रोकिएको थियो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बजेट दिएपछि रनवे निर्माणले पुनः तीव्रता पाएको थियो । पत्रपत्रिकाबाट
सोझा नेता चित्रबहादुर केसीको गम्भीर अपराध
काठमाडौं । जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीको छुट्टै छवि छ । समकालीन राजनीतिमा मूल्य, निष्ठा र
हजारको नोटको हात्ति नेपालकै हो त ?
काठमाडौ । हजारको नोट अर्थात सजिलो भाषामा–‘हात्ती’ । तर, यसको त्यही हात्तीमाथि प्रश्न उठेको छ–के
३६ घण्टामै फ्लु संक्रमण फैलिएर ८ करोड मानिसको ज्यान लिने चेतवानी
काठमाडौ । फ्लु संक्रमणबाट फैलिने रोगको प्रकोप विश्वभर ३६ घण्टामै फैलिएर ८ करोड मानिसको ज्यान
११७ सैनिक कारबाहीमा, कारण यस्तो छ
काठमाडौ । नेपाली सेनामा पुरस्कार र दण्ड सजायसम्बन्धी निर्देशिका कडाइका साथ लागू गरिएको छ ।